Cashar barasho: 5 habab oo lagu sawiro sawiradeena | Abuurista khadka tooska ah
Xaqiiqdii marar badan ayaad heshay ama xitaa qaaday sawir aad jeceshahay, laakiin loogu talagalay arrimaha fiiqan Ma awoodid inaad la shaqeyso maxaa yeelay markaad la qabsaneysid qaabkaaga ama markii aad daabacayso, waxaad aragtay sida ay u lumisay fiiqnaantiina uga qaaday xirfad-nimadaada. Mararka qaarkood (had iyo jeer maahan, waxay kuxirantahay dukumiintiga asalka ah), dhibaatooyinkaan waa la xalin karaa ama la jilcin karaa, iyadoo inta badan laga soo kabanayo muuqaalka xirfadeed ee aan ugu baahanahay mashaariicdeena.
Tani waa dhibaato aad u badan, sidaa darteed waxaan qiyaasayaa inay waxtar yeelan doonto in la ogaado shantaan qaab si loo saxo cilladahaas loona gaaro muuqaal aad u qurux badan. Iyaga ku raaxee!
1 Saamaynta midabada leh lakabyada hagaajinta
2 Saamaynta sare
4 Maaskaro diirad saar
5 Geesaha fiiqan
Saamaynta midabada leh lakabyada hagaajinta
Habkani wuxuu naga caawin doonaa inaan siino sawirradeenna tayo sare iyo xirfad-yaqaannimo, sidoo kale waxay waxtar badan u leedahay ka takhalusidda daaqa ama dusha aad u liita. Marka hore waxaan abuuri doonaa lakab isku habeyn madow iyo caddaan ah. Lakabkan hagaajinta waxaan ku dabaqi doonnaa qaabka isku dhafka ah ee Soft Light. Marka xigta waxaan ku laaban doonnaa dejimaha lakabkeenna hagaajinta oo aan bilaabi doonnaa inaan wax ka beddelo midabada siinaya qoto dheer. Sidaad u aragto, saameyntani waxay u qaybsan tahay lix qaybood: Casaanka, Jaalaha, Cagaarka, Cyan, Buluug iyo Magenta. Waxaan beddeli doonnaa heerka mid kasta oo ka mid ah awoodda muuqaalka, inkasta oo ay jiraan qalab ka dhigi kara hawsha mid aad u fudud. Iskusoo wada duuboo dhamaan nidaamyadan aan soo taxnay waxaa kujira badhan yar oo qaab gacanta ah, hadaad riixdo waxaad ogaan doontaa inuu dhibicuhu muuqdo. Qalabkani wuxuu noo oggolaan doonaa inaan hawsha ugu qabanno qaab buug iyo dhaqso leh. Si aan ula shaqeyno, waxaan kaliya dooran doonaa midab adigoo gujinaya sawirka isla markaana jiirkayaga u jiidaya midig ama bidix si aan wax uga badalno xoogiisa iyo heerkulkiisa. Waxaan ku soo celin doonnaa geeddi-socodka mid kasta oo ka mid ah midabbada ka kooban sawirka, annagoo isku dayeyna inaan ilaalino xaqiiqada oo aan ku gaarno isku-dhafnaan wanaagsan
Waxaan horeyba ugu isticmaalnay qaabkan qoraallo hore, (xusuusnow inay ku habboon tahay abuurista farshaxanno ama qaabab dhagax) waxaanan uga faa'iideysan karnaa inaan ku dhufanno faahfaahinta sawirkeennu ka turjumayo. Ugu horreyntii waxaan soo dejin doonnaa sawirka aan ka shaqeyn doonno waana ku soo koobi doonnaa si aan u siino qaab isku-dhafan si loo daboolo. Marka xigta waxaan ku dabaqi doonnaa miiraha pass-ka sare ee shaandhada shaandhada> Kuwa kale> High Pass. Inkasta oo qiimaha aan codsaneyno uu ku kala duwanaan doono iyadoo ku xiran dukumiintiga aan ka soo xiganeyno, guud ahaan waxaa lagugula talinayaa inaad dalbato qadar u dhexeeya 3 iyo 5 pixels, in kasta oo aad horey u ogtahay inay taasi kala duwanaan karto, sikastaba waxaan kugula talinayaa inaad tijaabiso ilaa aad ka heshid midka ugu habboon. Marka laga hadlayo qaababka isku dhafka ah waxaan ku ciyaari karnay dhowr waxyaalood oo kala duwan, badiyaa waxaan isticmaalaa qaababka isku dhafka fudud iyo iftiinka jilicsan. Sidoo kale, haddii aan u baahanahay inaan wax ka bedelno awoodda saameyntani fiiqan tahay, waxaan ku sameyn karnaa annaga oo wax ka beddelayna mugdiga lakabka sare ama ku celcelinta geeddi-socodka oo dhan lakabka cusub. Sidaad ogtahayba adiga ayey kugu xirnaan doontaa. Waxaa jira sawirro u baahan daaweyn dheeri ah iyo kuwo kale oo u baahan saameyn aad u fudud.
Gaussian blur for sharpness? Haa Sidaad ogtahayba waxay kuxirantahay sawirka aan lashaqeyno iyo natiijada aan raadineyno. Habkan fudud wuxuu badanaa u adeegaa inuu ku dhaqmo dhalaalka sawirka si uu u siiyo awood weyn iyo hufnaan hab jilicsan oo macquul ah. Si loo dalbado waxaan ku bilaabi doonnaa soo dejinta sawirka aan ku shaqeyn doonno. Waxaan nuqul ka sameysan doonnaa lakabkan oo waxaan aadi doonnaa Filter> Blur> Gaussian blur. Waxaan ku quseyn doonaa qadar 2 ama 3 pixels ah ugu dambeyntiina waxaan ku dabaqi doonnaa qaab isku-darka isku-darka. Natiijadu waa qeexitaan weyn oo ku saabsan waxyaabaha muhiimka ah si aad u fudud oo wax ku ool ah.
Maaskaro diirad saar
Waan soo dejin doonnaa sawirkeenna waana nuqulan doonnaa. Marka xigta, waxaan ku dalban doonnaa miiraha nuqulkan. Waxaan aadi doonnaa menu-ka Filter> Focus> Maskaxda Shaashadda. Waxaan qaabeyneynaa tiro ah 65, gacan gacan 4 ah iyo marinka 1. Waxaan siineynaa ok waana aan dareemi doonnaa horumar weyn. Haddii aan dooneyno inaan sii wanaajinno sawirkan, waxaan markale ku celin doonnaa saameynta Filter> Sharpen> Maskaxda Shaashadda. Waxaan codsan karnaa howsha inta jeer ee loo baahdo, laakiin sidoo kale waxaan kaaga digayaa inay aad u fududahay in la gubo sawirka oo laga saaro realsimo, marka waxaan kugula talinayaa inaadan waligaa tirtirin lakabka asalka ah si aad isu barbardhigto una ogaato ilaa heerka aan waxay hagaajinayaan sawirka ama ka sii darayaan.
Ka shaqeynta hareeraha geesaha sawir aad u sarreeya ayaa si weyn u wanaajin kara hufnaanta sawirka. Marka aan dhaweyno, waxaan lumineynaa fiiqan tanina inta badan waxay ka muuqataa geesaha. Si looga hortago tan marka ugu horeysa waa in lagu daboolo dusha sare ee Filter> blur> Dusha Indhaha. Waxaan ku siineynaa gacan 20 iyo marin 7 ah in kastoo taasi ay ku xirnaan doonto sawirka. Tan awgeed, sawirka si weyn ayuu u hagaagaa, laakiin waxaan ku wanaajin karnaa inaan ku darno miiraha geesaha. Waxaan aadi doonnaa menu-ka Filter> Sharpen> Geesaha Fiiqan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Tabobar: 5 habab oo lagu sawiro sawiradeena
Aad u fiican, aniga ahaan waxa ugu fiican dhammaanteen waa midka aad u isticmaasho Paso Alto.
Jawaab Yamil Manzur